Tantaran' i Madagasikara - Wikipedia
(tonga teto avy amin'ny Tantaran'i Madagasikara)
Ity pejy ity dia mamintina ireo zava-nitranga manamarika indrindra ny tantaran' i Madagasikara, dia ilay nosy ao amin' ny ilany andrefan' ny Ranomasimbe Indiana, ao atsimo-atsinanan' i Afrika.
1 Ny teny hoe "Tantaran' i Madagasikara"
2 Ny fiavian' ny anarana hoe Madagasikara
2.1 Hevitra ankinina amin' ny soratra ara-tantara sy ny haiteny
2.2 Hevitra miankina amin' ny fandalinana kolontsaina sy teny
3.1 Ny Vazimba: mponina voalohany indrindra
3.2 Ny hevitry ny teny hoe Vazimba
3.2.1 "Olona very hasina"?
3.2.2 "Vahoakan' ny ala"?
4.1 Ny nahalalana an' i Madagasikara voalohany ka hatramin' ny Fanjakana Hova
4.2 Fifandraisana amin' ny Arabo
4.3 Ny Fanjakana sakalava (1500 - 1700)
4.4 Ny Fanjakana merina (1700 - 1896)
4.4.1 Andrianampoinimerina (1787-1810)
4.4.2 Radama I (1810-1828)
4.4.3 Ranavalona I (1828-1861)
4.4.4 Radama II (1861-1863)
4.4.5 Rasoherina (1863-1868)
4.4.6 Ranavalona II (1868-1883)
4.4.7 Ranavalona III (1883-1896)
6.1.1 I Philibert Tsiranana
6.3.7 Ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina
6.3.8 Ny filoham-pirenena Andrinirina Rajoelina
Ny teny hoe "Tantaran' i Madagasikara"Hanova
Ny fiavian' ny anarana hoe MadagasikaraHanova
Hevitra ankinina amin' ny soratra ara-tantara sy ny haitenyHanova
Hevitra miankina amin' ny fandalinana kolontsaina sy tenyHanova
Ny faha Vazimba (400 - 1500)Hanova
Ny Vazimba: mponina voalohany indrindraHanova
Araka ny volazan'i L. Ramaroson ao amin'ny Teto an' ivon' ny Riaka dia efa nisy olona nonina ihany teto Madagasikara tany amin' ny 2 000 taona tal. J.K. tany ho any, saingy mbola vitsy dia vitsy ny mponina teto tamin' izany. Ny Vazimba no voalaza fa nonina teto amintsika voalohany indrindra, dia ny taranak'ireo olona ireo izany no tondroina amin'io anarana io voalohany, fa voatondro ho Vazimba koa ireo Aziatika na Indonezianina efa nanomboka niorim-ponenana teto Madagasikara hatramin'ny taonjato voalohany taorian'i Jesoa Kristy.
Ny hevitry ny teny hoe VazimbaHanova
"Olona very hasina"?Hanova
Ho fanatevenana izay efa voalaza teo ambony dia nantsoina hoe Vazimba ireo Vazimba noho izy ireo resy an' ady tamin' ny fanafihana nataon' ireo mpiavy tonga taty aoriana (izay azo lazaina ho ireo razamben' ny fanjakana Merina). Azo rasaina toy izao ny teny hoe vazimba (voazimba), izany hoe "very hasina" satria resy an' ady. Niova moa ny teny manaraka ny andro ka azo heverina araka izany fa avy amin' ny teny malagasy hoe voazimba ny teny hoe vazimba. Tsy marina araka izany ny filazana hoe olona fonentana ny Vazimba na izay fomba hafa anoritsoritana azy amin' ny endrika fanaratsiana. Noho izy ireo very hasina no nahatonga ny olona manaratsy ny Vazimba toy izany satria heverina ho toy ny olona ambany saranga ny olona vazimba na voazimba.
"Vahoakan' ny ala"?Hanova
Ny teny hoe vazimba dia mety ho avy amin'ny teny daiaka sy maley hoe wa-yimba izay midika hoe na "vahoakan' ny ala". Ireo vahoaka tany amorontsiraka kosa dia nantsoina hoe vezo na bejo avy amin' ny teny maley hoe bajao. Ny teny hoe wa na va dia midika "andian' olona" na "vahoaka madinika". Niaraka tonga ny Vazimba sy ny Vezo saingy rehefa nahita ny Vazimba fa tsy azo ambolena ny morontsiraka dia niakatra ampovoantany.
I Madagasikara faha mpanjakaHanova
Ny nahalalana an' i Madagasikara voalohany ka hatramin' ny Fanjakana HovaHanova
Hatramin'ny taonjato voalohany taor. J.K dia tsy nazava loatra ny tena tantaran' i Madagasikara. Tsy nisy nahitana taratra fa nisy karazan' olombelona niaina talohan' io fotoana io, ka nahatonga ny fieritreretana fa tsy nanana fiandohan-tantara ity Nosy ity. P. Laforgue, izay mpandalina tantara dia nanambara fa "toe-javatra hafa kely izany, nefa dia izay no zava-misy".
Na ny nanazavana ny fiavian'ireo mponina sy ny fotoana tena nipoirany aza dia tsy voalaza mazava. Maro ny soso-kevitra naroso, isan'izany ny an'i G. Grandidier, mpikaroka, nilazana fa ny Malagasy dia Indô-melaniziana, nisy nifandraisany tamin' ny olona avy tao Papoazia. Ny governora Deschamps kosa dia nihevitra fa nisy ireo tansambo izay niatrika ny Ranomasimbe Indiana, ka izany no niheverany fa ny mponina indôneziana dia niala avy tany India sy ny sisin' i Afrika izay toerana nakan' izy ireo ny mainty hoditra. Rehefa izany dia nitohy tamin' ny sisin' i Afrika ny fifanakalozana mandra-pahatongan' ny fotoana nampatanjaka ny Arabo teo amin' ny fifamoivoizana an-dranomasina.
Araka ny hevitr' i Deschamps noho izany, ny mponina malagasy hatramin' ny fahagola dia fifangaroan' ny mponina indôneziana sy afrikana, na eo amin' ny fiteniny na eo amin' ny fomba amam-panao, ary niampy tsikelikely ireo maleziana, Hindò, Arabo, ary Eorôpeana.
Maro ireo tantsambo nandalo ny morontsirak' i Madagasikara; tao ny Arabo, i Marco Polo, i Vasco de Gama, ireo Portogey Pereira sy d'Acunha, de Gonneville,... fa tsy voalaza mazava na tena niantsona tamin' ny tany malagasy izy ireo na tsia.
Ny nanombohan' ny Fanjakana hova
Tsy nahazoana valiny mazava izy io, fa efa tamin' ny andron' Andrianampoinimerina vao nisy daty nazava. Ny taona 1300 kosa no noheverina ho nanombohan' ny Fanjakana hova tamin' ny andron' Andrianerinerina. Nanomboka teo ka nandritra ny taonjato roa teo ho eo, dia nisy mpanjaka dimy no nifandimby tao. Tamin' ny taona 1500 kosa no niakatra teo amin' ny fiandrianany ny mpanjakavavy Rafohy, ka tamin' ny androny no azo lazaina ho tena niforonan' ny fanjakana, tsy noho izy nahazo fanjakana hafa, satria izy dia niaina tamim-pahatsorana tao Imerimanjaka, fa noho ny fahendrena tsy nanam-paharoa nananan'ity vehivavy ity tamin'ny fandaminana ny fifandimbiasana teo amin' ny fiandrianana. Ny zanany vavy, Rangita, no nandimby azy tamin'ny taona 1520.
Fifandraisana amin' ny AraboHanova
I Madagasikara dia ivon-toeran' ny varotra miampita ranomasina izay mampifandray ny seranan-tsambo ao amin' ny Ranomasimbe Indiana tany am-piandohan'ny taonjato manaraka ny fitondran'olombelona. Ny tantaran'ny tantara nosoratana eto Madagasikara dia nanomboka tamin'ny Arabo, izay nametraka lahatsoratra ara-barotra teo amin'ny morontsiraka avaratra-andrefana tamin'ny faramparan'ny taonjato faha-10 ary nampiditra ny finoana silamo, ny soratra arabo (nampiasaina hanoratra ny fiteny malagasy amin'ny endrika manoratra fantatra amin'ny hoe sorabe), ny astrôlôjia arabo, ary ireo singa ara-kolontsaina hafa. Nanomboka tamin' ny 1500 ny fifandraisana Eorôpeana, rehefa nahita ilay nosy ny kapiteny portogey atao hoe Diego Dias. Ireo tranombarotra frantsay dia iniorina tamin'ny morontsiraka atsinanana tamin'ny faramparan'ny taonjato faha-17.
Ny Fanjakana sakalava (1500 - 1700)Hanova
Ny Fanjakana merina (1700 - 1896)Hanova
Tamin' ny fiandohan' ny taonjato faha-17 dia ny fanjakan' Imerina dia fanjakana tsy natanjaka raha noharina tamin' ireo fanjakana amoron-dranomasina lehibe kokoa ary mbola lasa kely kokoa ny fahatanjahany tamin'ny taonjato faha-18, nandritra ny fanjakan' Imerina efa-toko.
Radama I (1810-1828)Hanova
Ranavalona I (1828-1861)Hanova
Radama II (1861-1863)Hanova
Radama II dia nanandrana ny hamaha ny politikam-piarahamonin'ny mpanjakavavy, saingy roa taona taty aoriana dia noroahin'ny praiministra Rainivoninahitriniony (1852-1865) sy ny fifanarahana amin'ny Andriana sy ny Hova, izay nanandrana namarana ilay fahefana feno an' ny mpanjaka.
Ny 11 mey 1863 dia nisy nahazo baiko tamin' ny praiminisitra namono an-dRadama II. Rabodo vadiny no voatendry ho mpanjakavavin' i Madagasikara nandimby azy, nitondra ny anarana Rasoaherina.
Ranavalona II (1868-1883)Hanova
Ranavalona III (1883-1896)Hanova
Niharihary ny tsy faneken-dRanavalona III ny ho eo ambany fifehezan' ny Frantsay ka tamin' ny taona 1895 ny tafika frantsay notarihin'i jeneraly Duchesne dia naka an'Antananarivo. Izany fidiran'ny Frantsay an-keriny izany dia niteraka korontana eran'ny Nosy nefa nanaiky ny ho ambany fiarovan'i Frantsa ny fanjakan-dRanavalona III tamin'ny farany, tamin'ny taona 1896.
I Madagasikara faha fanjanahan-tany (1896 - 1960)Hanova
Vanim-potoana nidiran' ny Frantsay teto Madagasikara, fotoana nanamarika ny fidirany tao amin' ny taonjato faha-20. Azo lazaina hoe nitondra fandrosoana sy fivoaram-piainana ihany teo anivon' ny andavan'androny ihany raha ny fivoarana teo amin' izao tontolo izao no jerena. Saingy teo amin' ny lafiny pôlitika izay novolavolain' ny fanjanahantany ho tsy afaka hijoro sy hahaleo tena no mandrafitra ny tantarany ka niteraka ny fivakisan' ny firaisankina izay fototry ny maha nosy azy.
Tamin'ny voalohany indrindra, noho ny tsy fanajana ny Charte Lambert, dia nanafika an'i Madagasikara i Frantsa tamin'ny taona 1883, izay nanjary fantatra tamin'ny anarana hoe ady Hova-Frantsay voalohany. Tany amin'ny faran'ny ady dia namela ny tanànan'Antsiranana (Diego Suarez) ho an'i Frantsa i Madagasikara ary nandoa vola 560 000 francs ho an'ireo mpandova an'i Lambert.
Tamin'ny taona 1890, ny Anglisy dia nanaiky ny fananganana prôtektôrata frantsay eo amin'ny Nosy, saingy tsy neken'ny governemantan'i Madagasikara ny fahefana frantsay. Mba hanerena ny fieken-ko resy, ny Frantsay dia nanafika ny seranan-tsambon'i Toamasina teo amin'ny morontsiraka atsinanana, sy Mahajanga any amin'ny morontsiraka andrefana, tamin'ny Desambra 1894 sy Janoary 1895.
I Madagasikara mahaleotenaHanova
Ny Repoblika Voalohany (1960 - 1973)Hanova
I Philibert TsirananaHanova
I Tsiranana Philibert no filohan' i Madagasikara tamin' ny 1 Mey 1959 hatramin' ny 11 Oktobra 1972.
Tamin' ny 1 jolay 1959 dia nivory ny Antenimieram-pirenena ka nametraka ny fitokisany taminy ho filohan' ny Repoblika Malagasy voalohany mizaka tena. Tamin' ny 26 jiona 1960 no nahazo ny fahaleovantenany i Madagasikara. Tamin' ny 30 martsa 1965 dia voafidy fanindroany hitondra ny firenena i Philibert Tsiranana. Tamin' ny 30 janoary 1972 dia voafidy fanintelony ho filoha izy. Tamin' ny 13 mey 1972 ny tolon' ny mpianatra teo amin' ny Kianjan' ny Fahaleovantena teo Analakely, ka nahatonga ny fionganan' ny fitondrana Tsiranana.
Ny Repoblika Faharoa (1973 - 1991)Hanova
Ramanantsoa sy RatsimandravaHanova
Ny filoham-pirenena Ratsiraka DidierHanova
Ny Repoblika Fahatelo (1991 - 2014)Hanova
Ny filohan'ny HAE Zafy AlbertHanova
Ny filoham-pirenena Zafy AlbertHanova
Ny filohan'ny tetezamita Ratsirahonana NorbertHanova
Voamariky ny firongatry ny andiam-balala ny taom-pambolena ary zary lasa niteraka famoronana asa vaovao ny famongorana ny andiam-balala sy ny atodiny. Ny zanaky ny filoha no nahazo izany tsena izany, saingy tsy dia nifanaraka loatra tamin'ny vokatra nandrasana no azo.
Ny filoham-pirenena Ravalomanana MarcHanova
Ny taona 1999 nisy ny fifidianana izay ho ben'ny tanàna ka tamin'izany no nipoirana olona vaovao teo amin'ny sehatra politika. Anisan'ireny ny mpandraharaha tompon'ny orinasa Tiko, izay tsy fantatra fa ny vokatra vokarin'ny orinasany ihany no fantatra. Ravalomanana Marc no nanana fahasahiana nijoro hitondra fijery vaovao. Mbola tanora sy tsy mbola heno teo amin'ny tontolo politika malagasy ity lehilahy ity ka nanaitra ny mponin'Antananarivo izay toerana nilatsahany ho fidina.
Nanangana fikambanana izy nahazoany nilatsaka dia ny "Tiako i Madagasikara" tamin'izany. Nisy akony teo amin'ny fiainam-pirenena malagasy ny fitantanany ny renivohitra. Fa niezaka nitondra fanavaozana sy fanatsarana ny tanàna izy, indrindra ny lalana. Noho ity ben'ny tanànan'Antananarivo manana fahasahiana dia nipoitra tsikelikely ny olana taminy sy ny fitondram-panjakana foibe. Rehefa ho tonga ny fotoam-pifidianana izay ho filoham-pirenena dia nirotsaka ho fidina Ravalomanana Marc. Rehefa nirotsaka izy dia lany ho Filoham-pirenena ka nitondra nandritry ny 07 taona, izany hoe ny taona 2002 ka hatramin'ny taona 2009.
Ny filohan'ny Tetezamita Andry RajoelinaHanova
Nanao ny fianianana amin' ny maha filohan'ny Tetezamita azy i Andry Rajoelina tamin' ny 21 Martsa 2009 na dia tsy nankatoavin' ny fianakaviambe iraisam-pirenena aza izany. Araka ny hevitr' ireo izay tsy momba azy dia naka ny fahefana teto Madagasikara izy tamin'ny alàlan' ny fanonganam-panjakana.
Ny filoham-pirenena Hery RajaonarimampianinaHanova
I Hery Rajaonarimampianina dia kandidà tamin' ny fifidianana ny filoham-pirenena ny taona 2013. Faharoa izy tamin'ny valin'ny fihodinana voalohany, ary izy no mitarika ara-bato amin'ny fihodinana faharoa. Lany tamin' ny salan' isa 53,41 % izy tamin' ny fihodinana faharoa nanoloana ny kandidà Jean Louis Robinson. Na dia nolazain' ny mpanohitra azy fa nisy ny hala-bato, dia voambara ho filoha lany tamin' ny fifidianana filoham-pirenena voalohan' ny Repoblika fahefatra izy tamin' ny 17 Janoary 2014. Nandray ny fahefana tamin' ny 25 Janoary 2014 izy.
Ny filoham-pirenena Andrinirina RajoelinaHanova
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Tantaran%27_i_Madagasikara&oldid=1042918"
Dernière modification le 11 Janoary 2022, à 18:06
Voaova farany tamin'ny 11 Janoary 2022 amin'ny 18:06 ity pejy ity.